छबि र शिल्पाले दुई वर्ष अघिनै बिवाह गरेको खुलासा – Medianp
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २२, २०७५११:५९0
काठमाडौँ , निर्माता छबिराज ओझा र नायिका शिल्पा पोखरेलले दुइ वर्ष अघि नै बिवाह गरेको खुलासा भएको छ । यसको खुलासा अरु कसैले नभएर छाबिराज ओझाकि पूर्वपत्नी तथा चर्चित अभिनेत्री रेखा थापाले गरेकी हुन् । ‘रमाइलो छ’ अनलाइनको प्रथम वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रकाशित स्मारिकामा आफ्नो विचार लेख्दै उनले यो कुराको खुलासा गरेकी हुन् ।
यति मात्र हैन डिभोर्स भएको धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि आफ्नो नाम मिडियाले छबिराज संग जोड्न नछोडेको भन्दै आफु यो कुरा बाट ‘इरिटेड’ भएको समेत खुलासा गरिन् । उनि भन्छिन् – ”कुनै समय मैले लगाउने सर्ट, स्कर्ट, छविराज ओझासँगको प्रेम, बैबाहिक सम्बन्ध र त्यसपछिको डिभोर्सले मिडियामा खुब स्थान पायो ।
पब्लिक फिगर भएकाले मेरो जीवनका गतिबिधिमा पाठक- दर्शकको चाख हुन्छ र पनि म सबै कुराहरुलाइ सहज रुपमा लिए तर, इरिटेट त्यहाँनेर हुन्छु, जब मलाई छविराज ओझासँग अहिले पनि जोडिन्छ, जबकि डिभोर्स भएर उहाँले शिल्पा पोखरेलसँग बिहे गरेको दुई वर्ष भइसक्यो ।’ उनको यो बयान संगै यतिबेला नेपाली सिने बजार तातेको छ । आखिर कहिले-कसरि गरे छबि र शिल्पाले बिवाह ?
हुन त यस अघि पनि छविराज ओझा र शिल्पा पोखरेलको बिवाहको खबर नआएका हैनन् तर पनि उनीहरुले यो बिषयमा खुलेर बोलेका छैनन्। यहाँ सम्म कि संगै अन्तर्वार्ता दिंदा बिवाहको कुरा हुने भन्दै मिडियामा संगै अन्तर्वार्ता दिन समेत नखोज्ने यी जोडीले किन बाहिर ल्याएनन् बिवाहको कुरा ! त्यो भने पछि नै थाहा होला । रेखाको यो बयान पछि अहिलेलाइ भने हामि यति मात्र भन्न सक्छौं – ढिलै भएपनि – ‘Happy Married life छबि एण्ड शिल्पा’ ।
डिप्रेसनको सिकार भएका कपिल यस्तो अवस्थामा भेटिए